Gaashaamo xiisad kadhalatay Tacadigii Liyuugu kagaystay Tuulada Xaaji Saalax. | ogaden24
Gaashaamo xiisad kadhalatay Tacadigii Liyuugu kagaystay Tuulada Xaaji Saalax.
Mar 15, 2019 - Aragtiyood
Magaalada Gaashaamo ee Gobolka Jarareed waxaa kataagan xiisad kadhalatay Jidh dil ciidanka Liyuugu u Gaysteen masuuliyiinta ugu saraysa mamulka degmada Gaashaamo.
Kuxigeenka Gudomiyaha degmada Gaashaamo mudane Abdullahi Raygal iyo madaxa xafiiska Kahortaga Masiiboyinka Muse Xaamud, ayay ciidanka Liyuugu kujidh dileen Tuulada Xaaji Saalax waxaana Jidh dilka masuuliyiintu kadhashay xil kaqaadis lagu sameeyay Haweeney xidhiidh kala dhexeeyay sargaal katirsan Liyuuga oo mamulka Tuulada katirsanayd.
Jidh dilkaasi waxashnimada ah iyo Faragalinta ciidanka Liyuugu kusameeyeen arimaha mamulka degmada Gaashaamo, ayaa Kaliftay inay Gadoodaan shacabka magaladu waxaana subaxa saaka ah ilaa iyo shalay magalada Kataagan mudaharaad lagaga soo Horjeedo Talaabada ciidanka Liyuugu Qaadeen.
Ciidamada Liyuu Police-ka ayaa wali sii wada dhibaataynta dadka shacabka ah ee aan Hubaysnayn oo ay si badheedh ah Rasaasta ula dhacayaan, waxaana Ficilka Foosha xun ee kadhacay Xaaji Saalax uu daba socdaa Toogashadii badheedhka ahayd ee degmada Dhagax-madow ay dhalinyarta ku Toogteen maalin kahor dhacdada Xaaji Saalax.